Buy Etravirine powder (269055-15-4) hplc≥XXX% | AASraw R & D Reagents
/ Products / R & D Reagents / Etravirine poids
SKU: 269055-15-4. Sokajy: R & D Reagents
Ny AASraw dia miaraka amin'ny fahaizana sy ny vokatra avy amin'ny gram ka hatramin'ny filamatry ny etravirine poids (269055-15-4), eo ambany fanaraha-maso CGMP sy ny rafitra fanaraha-maso kalitao.
Etravirine dia fanafody antiviral izay manakana ny selan'ny virosy VIH (VIH) tsy hihamaro ao amin'ny vatanao. Etravirine dia ampiasaina amin'ny fanafody hafa mitondra ny VIH amin'ny olon-dehibe sy ankizy izay farafaharatsiny 6 taona. Ny VIH dia miteraka ny otrikaretina azo avy amin'ny firaisana (SIDA). Etravirine dia tsy fanasitranana ho an'ny VIH na Sida.
Lahatsary poeta etravirine
Etravirine karazan-tsoratra fototra
Name: Etravirine vovoka
Formula Molecular: C20H15BrN6O
Meny fitetezana 435.284
Rano Etravirine roapolo ampiasaina
Etravirine fampiasana dite
Ny vovonan'aretina etravirine dia fanafody fitsaboana ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa entina mitondra ny virosy VIH (VIH) amin'ny olona izay farafaharatsiny 6 taona farafahakeliny. Ny vovobony etravirine dia ampiasaina rehefa tsy nahomby ny fanafody hafa. Ny vovonan'aretina etravirine dia karazam-panafody mitondra ny tsimokaretina VIH (non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor) (NNRTI). Miasa amin'ny fampiatoana ny otrikaretina VIH izy amin'ny fizarana sy ny fanaparitahana.
Ity fanafody ity dia tonga amin'ny endrika takelaka ary matetika isaina isan'andro isan'andro, aorian'ny sakafo. Ny vovobonin'ny etravirine dia tokony ho voatelina amin'ny rano iray vera.
Ny voka-dratsin'ny voambolana mahazatra dia ahitana ny fifangaroana, ny fahakiviana, na ny fanaintainana eo amin'ny tanana na ny tongotra, ary ny aretim-pivalanana.
Inona no atao hoe vovobonin'ny etravirine?
Adilan'ny olon-dehibe amin'ny VIH
200 mg am-bavaka indroa isan'andro aorian'ny sakafo
Fahasalaman'ny zaza ho an'ny VIH
6 ho latsaky ny 18 taona:
16 kg ka hatramin'ny 20 kg: 100 mg am-bavaka indroa isan'andro aorian'ny sakafo
20 kg ka hatramin'ny 25 kg: 125 mg am-bavaka indroa isan'andro aorian'ny sakafo
25 kg ka hatramin'ny 30 kg: 150 mg am-bavaka indroa isan'andro aorian'ny sakafo
30 kg na mihoatra: 200 mg am-bavaka indroa isan'andro aorian'ny sakafo
Tsy misy fanitsiana voatondro.
Fanitsiana dosage faneno
Fahasamihafana malefaka na tsy fahampian-tsakafo (Child-Pugh Class A na B): Tsy misy fanitsiana voatondro.
Fahasamihafana mahery vaika (Child-Pugh Class C): Tsy misy data
Ahoana ny fiasan'ny vovo-dronono etravirine?
Ny vovonan'aretina etravirine dia ampiasaina miaraka amin'ny fanafody hafa hiadiana amin'ny otrik'aretina vokatry ny virosin'ny otrikaretina VIH (VIH). Ny VIH no viriosy mahatonga ny aretina azo avy amin'ny firaisana (SIDA). Ity fanafody ity dia omena ny marary izay nahazo fitsaboana VIH tany aloha.
Ny vovobony etravirine dia tsy hanasitrana na hanakana ny VIH na Sida; Na izany aza dia manampy amin'ny fitazonana ny viriHIV amin'ny famokarana izy io ary toa mampiadana ny fandringanana ny rafitra immune. Mety hanampy amin'ny fanemorana ny sasany amin'ireo olana mifandraika amin'ny SIDA na aretina VIH. Ny vovobony etravirine dia tsy hanakana anao tsy hiparitaka amin'ny VIH hafa. Ireo olona mandray io fitsaboana io dia mety mitohy manana olana hafa mifandraika amin'ny SIDA na aretina VIH.
Nipoitra ny areti-mandringana mahery vaika, mety ho voan'ny aretin-koditra ary mety ho faty. Ny fanehoan-kevitry ny fihanaky ny aretina (nohazavaina amin'ny fihoaram-pefy, ny famaritana ny lalàm-panorenana, ary indraindray ny organdysfunction, anisan'izany ny tsy fahombiazan'ny aty) dia notaterina ihany koa. Ny habetsaham-pon'ny ankamaroan'ny olona dia nitranga tao anatin'ny herinandro 6 momba ny fitsaboana. Raha mitombo ny famantarana na soritr'aretin'ny fanehoan-kevitry ny hoditra na ny fihetseham-po manadrohadro, dia tokony hajanona ny fitsaboana Aretina etravirine indray mandeha, ny toeram-pitsaboana (tafiditra ao anatin'izany ny marary transaminase) dia tokony hijery, ary tokony hatao ny fitsaboana sahaza azy. Ny fahatarana amin'ny vohoka etravirine aorian'ny fanombohan'ny hanoanana mafy dia mety miteraka fihetseham-po mahatsiravina.
Ny vovobony etravirine dia mety hifaneraserana amin'ny zava-mahadomelina maro vokatry ny fiovaovana plasma miovaova amin'ny zava-mahadomelina hafa na ny vovobony Etravirine. Tokony hotsaraina ny marary mba hitatitra ny fanafody rehetra miaraka aminy, anisan'izany ny fanafody tsy famaritana sy ny fanampim-bokatra momba ny sakafo; indrindra ny karazan-tsakan'i St. John.
Ny firaisana ara-foibem-pambolena miafina dia efa nitranga nandritra ny fitsaboana antiretroviral. Ny marary mandray andraikitra amin'ny fitsaboana dia mety miteraka valim-panafody amin'ny voka-dratsin'ny fanararaotam-pahefana na fialan-tsiny ary mitaky fandalinana sy fitsaboana.
Ny voka-dratsin'ny VIH dia tsy misy fanavakavahana amin'ny atidoha (NNRTI) amin'ny tsy fampidirana ny transcriptase (neonucleoside reverse) fa tsy nafenina tanteraka. Ny fanoherana mifanohitra amin'ny NNRTI hafa dia andrasana aorian'ny tsy fahombiazan'ny virologia miaraka amin'ny fitsaboana etravirine izay misy ny virologia mitoka-monina. Tokony hatao amim-pitandremana ny fisafidianana ireo mpangalatra antiretroviral amin'ny fitsaboana medikaly amin'ny marary.
Ny fampiasana miaraka amin'ny solontenan'ny antiretroviraly hafa dia hampitombo ny valin'ny fitsaboana. Ireo marary izay niaina viriosy virologika amin'ny fitiliana NNRTI dia tsy tokony hampiasa ny vovobony etravirine miaraka amin'ny atidoha nokleaside / nucleotide reverse transcriptase.
Tsy nisy ny fitsaboana sy ny fahasalamana tamin'ny fitsaboana - ny marary.
Tokony hojerena manokana ny fisafidianana tsara, ny fandefasana ny medikaly, ny fampitaovana fampahalalana, ary ny torolàlana fampidiran-dresaka mba hampihenana ny mety ho voka-dratsin'ny fikarakarana ara-pahasalamana, ny fifehezana ary ny tsy fahatokisana.
Ravinify etravirine marketing
Manana fiantraikany mahatsiravina ny vovobony mena
Mitadiava fanampiana ara-pahasalamana raha toa ianao ka misy marika amin'ny fanehoan-kevitra mampihetsi-po: hives; fahasarotana mamindra; fihenan'ny tarehinao, molotra, lela, na tenda.
Amin'ny tranga tsy fahampiana, ny vovobony Etravirine dia mety hiteraka toe-javatra izay miteraka ny fatiantoka ny taolam-paty, izay mitarika amin'ny tsy fahombiazan'ny voa. Antsoy avy hatrany ny dokotera raha tsy manaintaina ny fanaintainana, ny fahalemena, na ny fahalemena ianao, indrindra fa raha misy tazo, reradreraka mahazatra, ary pipia maizina.
Atsaharo ny vinaingitra etravirine ary miantso ny dokotera avy hatrany raha toa ka misy fiantraikany goavana toy ny:
ny tazo, ny fahoriany, ny fahalemen'ny hozatra, ny dian-tongotra na ny aretin-kozatra, ny fery vava, ny fahatsapana reraka, na ireo famantarana hafa momba ny aretina vaovao;
ny fanaintainana tratra, tsy fahatsapana fofona;
tsy ampy mahazatra na tsy misy mihitsy, fanimbana, tombony haingana;
haingana be ny fo, mitombo ny hatsembohana, ny tebiteby, ny olana amin'ny torimaso (tsy fahatsiarovan-tena), ny ahiahy na ny fisavoritahana;
aretim-pivalanana mafy, fihenan-tsakafo tsy fantatra, fiovan'ny taolana, tsy fahampiana, fahalotoana amin'ny firaisana ara-nofo;
fihenam-bolo ao amin'ny tendanao na tendanao (taratra lehibe);
fahalemena na fahatsapana tsiky amin'ny rantsantanana na rantsana;
olana amin'ny fifandanjana na ny hetsika amin'ny maso, ny fandrenesana miteny na fitelina;
ny fanaintainana mafy kokoa, ny fahaverezan'ny bakteria na ny fifehezana ny tsinay;
tsiranoka, fanaintainana tampoka ao an-kibo, fahaverezan'ny fandevenana, pipo maizina, tanimanga miloko volomparasy, jaundice (fanalana ny hoditra na maso);
ny famantarana voalohany amin'ny karazana hoditra rehetra, na kely aza ny hafanana; na
Ny fitsaboana mahery vaika, ny tazo, ny tenda malemilemy, ny fitenenana amin'ny tarehinao na ny lela, ny mibontsina eo amin'ny masonao, ny fanaintainan'ny hoditra, arahin'ny hoditra mena na volomparasy izay miparitaka (indrindra amin'ny vatana na ambony) ary miteraka blastera sy mipoitra.
Mety tsy hisy fiantraikany ratsy eo amin'ny lafiny hafa:
ny fahakiviana na ny fahatsapana eo amin'ny tananao na ny tongotrao;
kibo be loatra, fikorontanana, famonoana, vava maina;
nofy tsy mahazatra; na
Ny fiovana eo amin'ny endrika na ny toerana misy ny fatin-kibo (indrindra eo amin'ny sandrinao, ny tongotra, ny tarehiny, ny tendany, ny nonony, ary ny waist). "
Ahoana ny hividianana vovobony etravirine avy amin'i AASraw
naoty 2.60 avy tany 5
Tadalafila (Levitra cialis)
naoty 3.36 avy tany 5
Anjanahary fitsaboana aretin-tsaina (1)
Ahoana no fiasan'ny Orlistat ho toy ny fatiantoka lanja?